GFS Tank, Nchekwa Gas Membrane ugboro abụọ, ebe nchekwa gas na-ese mmiri - Boselan
NGW WAS AKW WASKWỌ mmiri
GFS tankị dị mma nke nguzogide corrosion dị mma, ụgwọ nchịkwa dị ala, ụbọchị ihe owuwu dị mkpirikpi, obere ihe achọrọ maka saịtị, arụmọrụ na-agbanwe agbanwe ma na-adịgide adịgide na-eme ka a na-eji ya n'ụzọ zuru ezu na nchịkwa mmiri na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, dị ka tankị IC, tankị aeration, tankị mmiri na radial sedimentation. tankị.
ỌR BI BIOGAS
A na-eji tankị BSL mee ihe n'ọtụtụ ebe na biogas project n'ụwa. A na-eji ya dị ka ọdọ mmiri mmiri, digester anearobic, digester digirinter nke abụọ, tankị mmiri na-echekwa mmiri, tankị nchekwa nke slgry biogas. GFS tank nwere uru dị mma maka ụbọchị nkwụgide corrosion, obere ihe achọrọ maka saịtị, arụmọrụ na-agbanwe agbanwe na-adịgide adịgide, nke na-eme ka ọ karịa ụdị tankị ndị ọzọ.
Mmiri na mmiri
Enwere ike iji tankị BSL GFS dị ka tankị mmiri dị elu, nke na-enye mmiri na mpaghara obibi. Nrụpụta ọrụ na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, ogologo usoro ndụ (ihe karịrị afọ 30), nguzogide corrosion dị elu na ụgwọ mmezi dị ala na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ mbụ maka itinye ego. Site na ịrụ ọrụ dị mma, nguzogide corrosion dị elu nke akụkụ na akụkụ, ma ọ bụ ọrụ ike dị ukwuu, dị ka arịa kichin, nri na ngwaahịa kemịkalụ na akụrụngwa nchekwa.
Ọ BIR IN EGO
Companylọ ọrụ anyị ejirila teknụzụ ọgbara ọhụrụ, akụrụngwa na igwe igwe ọkụ ọkụ CNC na-esite na ụlọ ọrụ nchekwa Europe, ihe eji arụ ọrụ igweaka akpaghị aka, akwa eserese akụrụngwa, nnukwu akụrụngwa ajị agba, CNC punch, ọkachamara na mmepụta nke platin steel steel. A na-eji ya echekwa soybean, mmanụ oriri, betel nut, ọka na ihe ndị ọzọ na-akọ ugbo. Ka ọtụtụ afọ nke mmepe gasịrị, ọ bụrụla onye a ma ama na-ebubata ngwa ahịa nke GFS nke ngwa silos na China na mba ofesi.
Mee ka ịmatakwu
Mwube ebe nchekwa mmiri na…